Ikhodi ye-QR eguquguqukayo enenombolo ehlukile ye-serial, i-China eguquguqukayo yekhodi ye-QR enabakhiqizi bezinombolo ezihlukile zenombolo, abahlinzeki, ifektri - iHainan Tianjian Anti-forgery Science & Technology Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Ilebula yokuphepha yekhodi ye-QR>Ikhodi eguquguqukayo ye-QR enenombolo eyingqayizivele ye-serial
Lawa malebula ezokuphepha adlulise ukuqinisekisa futhi athola ilungelo lobunikazi likazwelonke nelomhlaba jikelele.
Amalebula ezinombolo zomkhiqizo avame ukusetshenziswa emikhiqizweni ukulandelela ukuthunyelwa, izinsuku zamaqoqo, izinombolo zezinombolo nezimodeli. Izinsiza ezihlukile zokubala izinombolo ekulawuleni ikhwalithi futhi zivikela ekwenzeni mbumbulu.
1.Patented multi-ungqimba impahla ukuqinisekisa ukusebenza anti-mbumbulu yale ilebula.
2. Ikhodi ye-QR enemibala e-3D kanye nenombolo ye-serial yizici eziyinhloko zokulwa nomgunyathi, eziqoshwe ngokungahleliwe ngenqubo yokukhiqiza enelungelo lobunikazi.
Izici eziyinhloko zokulwa nomgunyathi zinokuphakama okuhlukile nemibala engxenyeni ngayinye, futhi uzizwe u-concave lapho uthintwa ngesandla. ngisho nathi asikwazi ukukhiqiza amalebula amabili afanayo.
4. Ukuphrinta kwensimbi kuthuthukisa isithombe somkhiqizo.
5. Ilebula ngayinye inenombolo eyingqayizivele ye-serial, abasebenzisi bangahlola i-QR Code nenombolo yokufaka ye-serial ukuqinisekisa imikhiqizo yangempela.
6. Ilebuli yokuphepha ingahle yakhelwe njengesidingo sakho.
2.Food and Beverage umkhakha
4.Automobile Lubricant umkhakha
Imboni ye-5.Beauty Care